ဒီသတင်းပတ် English American Style Idioms ကဏ္ဍမှာ ကောက်ရိုး လို့ အဓိပ္ပါယ်ရတဲ့ Straw ကို အခြေခံတဲ့ အီဒီယံအသုံးတချို့ ဖြစ်တဲ့ The last straw , To grasp at straws နဲ့ To draw straws တို့ကို တင်ပြထားပါတယ်။
(၁) The last straw
The last (နောက်ဆုံး)၊ straw (ကောက်ရိုးမျှင်) ဖြစ်ပြီး၊စကားစုတခုလုံးရဲ့  တိုက်ရိုက်အဓိပ္ပါယ်က နောက်ဆုံး ကောက်ရိုးမျှင်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ Idiom အသုံးက The straw that broke the camel’s back ဆိုတဲ့ဆိုရိုးစကားကနေဆင်းသက်လာတာပါ။ ပူပြင်းတဲ့ကန္တာရ ဒေသတွေမှာ ခရီးသွားဘို့ ၊ ပစ္စည်းသယ်ဘို့ အသုံးပြုတဲ့ Camel (ကုလားအုပ်) အနေနှင့်ကောက်ရိုးတွေကိုသယ်ရာမှာ၊ ကောက်ရိုးတပင်ထပ်ထည့်ပြီး သယ်ခိုင်းလို့ ၊ အဲဒီတပင်ကြောင့်ခါးရိုး ကြိုးရတယ်လို့တင်စားထားတာဖြစ်ပါတယ်။
တကယ်ဆိုကောက်ရိုးအစည်းတွေတင်ထားတဲ့ ကုလားအုပ်အနေနှင့်ကောက်ရိုးတပင်ထပ်သယ်ရလို့ ခါးရိုးကြိုးရလောက်တဲ့အဖြစ်မျိုးမရောက်နိုင်ပေမဲ့လို့လည်း၊ နေ့စဉ်လူတွေရဲ့ဘ၀မှာသီးခံရတာများလွန်းလို့ ဘာမဟုတ်တဲ့အကြာင်းအရာလေးတခုကြောင့် ဒေါသအိုးပေါက်ကွဲစေတာမျိုး၊ သီးမခံနိုင်တော့တဲ့အခြေဆိုက်တာမျိုး၊ မိတ်ပျက်စေတဲ့အခြေဆိုက်တာမျိုးကိုဆိုလိုပါတယ်။ ဒါကြောင့် The last straw ရဲ့ Idiom အဓိပ္ပါယ်က ခံရပါများတော့ဘာမဟုတ်တဲ့အကြောင်းအရာလေးကြောင့်၊ လူတဦးကိုပေါက်ကွဲစေတာ၊ ဒေါသထွက်စေတာ ကိုဆိုတာဖြစ်ပါတယ်။
It was the last straw for me to see my brother spend money onabrand new car! He still owed me money he had not paid back!
ကျနော့်ညီ ကားသစ်ကြီး ဝယ်စီးတာတွေ့တော့ ကျနော်လဲ ဒေါသအိုးပေါက်ကွဲတော့တာပဲ။ သူက ကျနော့်ဆီကချေးထားတဲ့ငွေကိုတောင်ပြန်မဆပ်သေးဘူး။
(၂) To grasp at straws
To grasp က လက်နဲ့ လှမ်းဆွဲတာ၊ ဆုပ်ကိုင် ဒါမှမဟုတ် လှမ်းကိုင်ဖို့ ကြိုးစားတာ၊ at က နေရာကို ရည်ညွှန်းတာ၊ straws က ကောက်ရိုးမျှင်တွေ ဖြစ်ပြီး စကားစုတခုလုံးရဲ့  တိုက်ရိုက်အဓိပ္ပါယ်က ကောက်ရိုးမျှင်တွေကို လှမ်းဆွဲဖို့ ကြိုးစားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအသုံးရဲ့  အီဒီယံအဓိပ္ပါယ်ကလည်း ရှင်းပါတယ်။ ကောက်ရိုးတွေကို လှမ်းဆွဲခြင်းအားဖြင့် အခြေအနေတခုဟာ ဘာမှ ထူးလာမှာမဟုတ်ပါဘူး။ ဥပမာ ရေနစ်လို့ ကောက်ရိုးတွေ လှမ်းဆွဲရင် ကိုယ့်ကိုယ်ကို ကယ်နိုင်မှာ မဟုတ်ပေမယ့်လို့လည်း ဒီနေရာမှာ ကောက်ရိုးတွေလိုပဲ နေ့စဉ်ဘဝမှာ နောက်ဆုံးမျှော်လင့်ချက်နဲ့ ရနိုင်တာတွေ၊ ဖြစ်နိုင်တာတွေကို ရလိုရငြား အားကိုးတကြီးနဲ့ ကြိုးစားတာမျိုးကို ဆိုလိုပါတယ်။ ဒီအသုံးရဲ့  အီဒီယံအဓိပ္ပါယ်က ကြံရာမရ လုပ်မိလုပ်ရာ မျှော်လင့်ချက်ကလေးနဲ့ ရလေမလားဆိုပြီးတော့ ကြိုးစားတာမျိုးကို ဆိုလိုပါတယ်။
ဒီအသုံးနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ဥပမာကို လေ့လာကြည့်ရအောင်ပါ။
My sister tried to save her marriage by grasping at straws . But, it didn’t work as her husband left her.
ကျနော့်ညီမက သူ့အိမ်ထောင်ရေးကို အဖတ်ဆယ်နိုင်ဖို့ နည်းမျိုးစုံနဲ့ ကြံမိကြံရာ၊ ရလိုရငြား ကြိုးစားကြည့်သေးတယ်။ ဒါပေမဲ့ မအောင်မြင်ခဲ့ဘူး။ သူ့ခင်ပွန်းကို သူကို ပစ်သွားတယ်။
(၃) To draw straws
Draw က ဆွဲတာ၊ မဲနှိုက်တာ၊straws က ကောက်ရိုးမျှင်တွေဖြစ်ပြီး၊ စကားစုတခုလုံးရဲ့  တိုက်ရိုက်အဓိပ္ပါယ်က ကောက်ရိုးမျှင်တွေကို ဆွဲတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအသုံး ဆင်းသက်လာတာက ရှေးတုံးက မဲနှိုက်မယ်၊ ကံစမ်းမယ်ဆိုရင် တုတ်တွေလိုပဲ အတိုအရှည်တွေရှိတဲ့ ကောက်ရိုးမျှင်တွေကိုစုပြီး အပေါ်ကနေ ဆွဲခိုင်းရာမှာ ဆွဲတဲ့လူက အရှည်ရရင် အနိုင်ရမယ်၊ အတိုရရင် ရှုံးမယ် စသဖြင့် ကြိုတင်သဘောတူထားတဲ့ ဓလေ့ကနေ ဆင်းသက်လာတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအသုံးကို နောက်ပိုင်းမှာတော့ မဲနှိုက်ရာမှာဖြစ်ဖြစ်၊ ကံစမ်းရာမှာဖြစ်ဖြစ် Draw straws လို့ ရည်ညွှန်းသုံးလာပါတယ်။ တကယ့်တကယ်တော့ မဲနှိုက်ရာမှာ ကောက်ရိုးတွေကို အသုံးပြုမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ အခုခေတ်မှာတော့ စက္ကူမဲလိပ်လေးတွေလုပ်ပြီး မဲနှိုက်လေ့ရှိတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် To draw straws ရဲ့  အီဒီယံအဓိပ္ပါယ်က မဲနှိုက်တာ၊ ကံစမ်းတာ၊ မဲလိပ်ဆွဲတာကို ဆိုလိုပါတယ်။
Let’s draw straws to decide who will take the night duty for next week!
နောက်သတင်းပတ် ညပိုင်းအလုပ်တာဝန် ဘယ်သူဆင်းမလဲဆိုတာဆုံးဖြတ်ဖို့ မဲနှိုက်ကြရအောင်။
ဒီသတင်းပတ် တင်ပြခဲ့တဲ့ idiom အသုံးတွေက The last straw , To grasp at straws , နဲ့ To draw straws တို့ ဖြစ်ကြပါတယ်။
Straw စကားလုံးဆိုင်ရာ အီဒီယံအသုံးအနှုန်းများ